RASMI: Luka Modric oo heshiis cusub u saxiixay kooxdiisa Real Madrid – Gool FM
RASMI: Luka Modric oo heshiis cusub u saxiixay kooxdiisa Real Madrid
(Madrid) 18 Okt 2016 – Luka Modric ayaa u saxiixay Real Madrid heshiis cusub oo ku eg ilaa 30 bisha June sanadka 2020 sida ay goordhow xaqiijisay kooxda ka dhisan garoonka Santiago Bernabeu.
Xiddiga xulka qaranka Croatia ayaa heshiiskiisa waxa uu ku ekaa sanadka 2018, laakiin hadda waxa uu ogolaaday inuu labo sano oo hor leh ku sii kordhiyo oo uu mustaqbalkiisa u hibeeyo Madrid.
Luka Modric ayaa kooxda haysata Champions League kaga soo biiray Tottenham bishii Agoosto sanadkii 2012-kii, waxaana uu tan iyo markaas ka mid noqday xiddigaha furaha u ah kooxda ka dhisan caasimadda Spain.
31-sano jirkaan ayaa 180 kulan u ciyaaray kooxda Real Madrid ilaa iyo hadda tartammada oo dhan, waxaana uu kula guuleystay labo Champions League, labo UEFA Super Cup, koobka kooxaha Adduunka, Copa del Rey iyo Supercopa de Espana.
Romania oo soo bandhigtay astaanta qaybta ay ka marti gelinayaan EURO 2020 + Sawirro
''Capello ma caqli badna...Haddaan qabi lahaa xaaska Figo oo kale gurigayga ayaan joogi lahaa!'' - Ronaldo oo ka sheekeeyay waxyaabo badan oo aadan ogayn sida suuxdin qabsatay 1998-kii & waxa ugu wacan dhaawacyadii ragaadiyay!